တောင်သမန်သားလေး: April 2015
Jailbreakဆိုတော့ ထောင်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်.. jailbreak ဆိုတာ apple users များ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်.. android users
သုံးသူများတွင် root လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ လည်း process
ချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ.. Jailbreak လုပ်တယ်ဆိုတာ apple ios စည်းဖောက်ခြင်း
တစ်ခုမျိူးပါပဲ.. အဲဒီလုပ်မှာလည်း root access ၇မှာလေဗျာ..jailbreak လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေ ၇သလဲဆိုတော့.. Myanmar Font သွင်းရမယ်၊ System tweak
လုပ်လို့၇မယ်..Thirdparty softwares တွေသွင်းလို့၇မယ်.. Themes တွေ စိတ်ကြိူက်သုံး၇မယ်၊ ကျွန်တော် ၀ယ်မသုံးနိင်တဲ့ apps ကို cracked version အနေနဲ့သုံး
လို့၇မယ်..jailbreak လုပ်ခြင်းဆိုးကျိူးကတော့ system unstable ဖြစ်နိင်ပါတယ်၊ cydia source တွေ မှားသွင်းမိ၇င်တော့ အခန့်မသင့် firmware restore ပြန်လုပ်
၇မယ်.. Jailbreak လုပ်နည်း Untethered Jailbreak and Tethered ဆိုပြီး နှစ်မျိူး ၇ှိသည်၊ Untethered Jailbreak ဆိုတာ iPhone,iPad ကို restart သို့မဟုတ်
power shutdown ချ လည်း jailbreak က ပျက်မသွား အဲဒါကို untethered jailbreak ခေါ်တာပါ..Tethered jailbreak ကတော့ iPhone,iPad ကို restart သို့မဟုတ်
power shutdown ချ ၇င် jailbreak က ပျက်သွားတယ်ဗျာ..Boot into Tethered Mode ဆိုပြီး မိမိjailbreak လုပ်ခဲ့ဆော့ဝလ်နဲ့ pc ချိတ်ပြီး ပြန်နိုး၇တယ်..ကဲ အဆင်ပြေ
ကြပါစေ.. ကဲ အခုတော့ နာမည်ကြီး jailbreak software စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်..
Admin - P0d3
ဒီ Post ကိုမေးထားတဲ့သူအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ ၊ တော်တော်များများ တွက်လဲ အသုံးဝင် လိမ့်မယ်လို့ လဲထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီ Post ဟာ Beginner များအ တွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အခြေခံနား လည်စေရန်ရှင်းပြထားရုံသက်သက်
Posted by lin linn at 6:42 AM
Screen Video Recorder: NO-ROOT v.6.0 APK
Screen Recorder Apk လေးပါ ဘော်ဒါတစ်ယောက် facebook စေါန မှာတောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းမှာ အရေးကြီး မှတ်စရာ ပုံ/ဗီဒီယိုတွေကို ဖုန်းမှာ Root မလိုဘဲ Recoder မှတ်ထားပေျးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Screen Video Recorder: NO-ROOT / Screenshots
Screen Video Recorder: NO-ROOT / Description
Posted by lin linn at 6:26 AM
သင့်ပုံလေးကို ခဲပန်းချီ /ကာလန်းeffect လေးနဲ့ပိုလှစေမယ့် - Sketck Me! Pro v1.51 Apk
သင့်ပုံလေးကို ခဲပန်းချီ /ကာလန်းeffect လေးနဲ့ပိုလှစေမယ့် - Sketck Me! Pro v1.51 Apk လေးပါ ပုံမှန် ပုံလေးထက် ပိုလှသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Sketck Me! Pro v1.51 Apk | 2.3 MB | Resumable Links |
*** AirDroid အသုံးပြုနည်း နှင့် အသုံးဝင်ပုံ ***
AirDroid အကြောင်းကို ရေးချင်တာကြာခဲ့ပြီ။ သိတဲ့အတိုင်း လိုင်းမကောင်းလို့အခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ AirDroid ဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရရင် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာကနေ အသုံးပြုတာပါ။
internet connection သုံးပြီး ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် မိမိဖုန်းကို online ကနေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ AirDroid ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Gmail Account တစ်ခု ရှိရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။Connection ကောင်းရင်တော့ အသုံးပြုရတာ အတော်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဖုန်းကနေ Wifi လွှင့်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက်သုံးကြတယ်။ SMS ၀င်လာတဲ့အခါ ၊ ဖုန်းထဲက တစ်ခုခုကို ကြည့်ချင်တဲ့အခါ ၊ App တွေကို install / uninstall လုပ်ချင်တဲ့အခါ .. စတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဖုန်းကို ကိုင်ပြီး ပြုလုပ်ရပါတယ်။ အင်တာနက်လဲ အသုံးမပျက်၊ ဖုန်းကိုလဲ ကိုင်စရာမလိုပဲ ထို ကိစ္စများကို ကွန်ပျူတာကနေ လုပ်ဆောင်ချင်ရင်တော့ AirDroid ဆိုတဲ့ App လေးက လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။ အင်တာနက်သုံးရင်း online ကနေ ကိုယ့်ဖုန်းကို
လှမ်းပြီး ထိန်းချုပ်ကြည့်မယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့ App လေးဆိုတော့ သိတဲ့သူလဲရှိမယ်။ မသိတဲ့သူတွေလဲ သုံးကြည့်ပါလို့ ညွှန်ပါရစေ။ လိုင်းမကောင်းဘူး .. သုံးမရဘူး ဆိုလဲ လိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာသာ စမ်းကြည့်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ ဖုန်းလိုင်းနဲ့သုံးတာပါပဲ။
လိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာ သုံးလို့ အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
** AirDroid Register **
AirDroid ဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိသွားပြီဆိုတော့ AirDroid စတင် အသုံးပြုပုံလေး ရှင်းပြပါ့မယ်။ AirDroid App ကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင် install လုပ်ပါ။ ပုံ(၁)မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အရင်ဆုံး AirDroid မှာ Register လုပ်ရပါမယ်။ Sign in via Google ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး Gmail နဲ့ Gmail Password ရိုက်ပြီး Register လုပ်လိုက်ပါ။ သင့်ဖုန်းထဲမှာ Google Account ထည့်ပြီးသားဆိုလဲ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ ရွေးပြီးသွားရင် Active လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ Active ကို နှိပ်လိုက်ရင် ပုံ(၂) မှာလိုမြင်ရပါမယ်။ ဒါဆို Register လုပ်ပြီးပါပြီ။
** AirDroid Web Server **
ကွန်ပျူတာကနေ အသုံးပြုဖို့အတွက် AirDroid Web Server ကို သွားရပါမယ်။ FireFox ကနေ http://web.airdroid.com/ ဆိုတဲ့ လိပ်စာကို ရိုက်ပြီးသွားပါ။ ပုံ(၃)မှာလို မြင်ရပါမယ်။ Sign in လုပ်ပေးရပါမယ်။ ခုနက မိမိ Register လုပ်ခဲ့တဲ့ Gmail Account နဲ့ Password ရိုက်ကာ Sign in ၀င်လိုက်တာနဲ့ AirDroid ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ချိတ်မိသွားပြီဆိုတာနဲ့ မိမိဖုန်းမှာ ပုံ(၄)မှာလို မြင်ရပါမယ်။ ဒါဆို ဖုန်းနဲ့ AirDroid Web Server နဲ့ချိတ်သွားပါပြီ။ ပုံ(၅)မှာမြင်သလို ကွန်ပျူတာမှာ မြင်ရပြီဆိုရင်တော့ AirDroid ကို အသုံးပြုလို့ ရနေပါပြီ။
** AirDroid လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ **
- Message (SMS) , Contacts , Call Logs
ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းမှာ SMS ပို့သလိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ အသုံးပြုသလိုပါပဲ။ ပို့ချင်တဲ့ နံပါတ်ရိုက် (09 ................) ပြီး
sms ရေးကာ ပို့လိုက်ရုံပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ sms တွေကိုလဲ မြန်မာလို ..
အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေလဲ။
sms ပို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းကို သွားကြည့်စရာ ..
မလိုတော့ဘူး။ ကွန်ပျူတာကနေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Contacts များနှင့် Call Logs များကိုလဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ သီချင်း နှင့် ဗီဒီယိုများကိုလဲ မွှေနှောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းများကို ကွန်ပျူတာကနေ လှမ်းဖွင့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုများကိုလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်ရင် download ဆွဲပြီး ..
ဖုန်းထဲမှ သီချင်း နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
- Apps , Photos , Ringtones , files
မိမိဖုန်းထဲမှ Application များကိုလဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
App များကို ကွန်ပျူတာကနေ install / uninstall လုပ်နိုင်တယ်ဗျာ။
ဖုန်းထဲမှ လိုချင်သော App များကိုလဲ download ဆွဲကာ သိမ်းနိုင်တယ်။
ဓါတ်ပုံများလဲ ရှာဖွေနိုင်တယ်။ Ringtones များကိုလဲ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။
မိမိဖုန်းထဲမှာ File Manager အသုံးပြုသလိုမျိုး ကွန်ပျူတာကနေ ..
ဖုန်းထဲကို အသေးစိတ် မွှေနှောက်ရှာဖွေနိုင်တယ်။
- Screenshot , Camera
မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာကနေ Screenshot လှမ်းရိုက်နိုင်ပါတယ်။
Screenshot ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိဖုန်းက Root လုပ်ထားဖို့တော့
လိုအပ်ပါတယ်။ ဖုန်း Camera ကိုလဲ လှမ်းသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
ကွန်ပျူတာကနေ မိမိဖုန်း ကင်မရာမှ မြင်ရသမျှကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရေရေလည်လည် အသုံးဝင်တယ်နော်။ အင်တာနက်သုံးနေတဲ့အခါ ..
AirDroid Web Server ကို ဖွင့်ထားပြီး အင်တာနက်လဲ အသုံးမပျက် ..
မိမိဖုန်းကိုလဲ ကိုင်စရာမလိုပဲ လှမ်းထိန်းချုပ်နိုင်တော့ ရှယ်ပဲပေါ့ဗျာ။
ဒီလောက်ဆို အားလုံး နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မစမ်းဖူးသေးတဲ့ ဘော်ဒါတို့ စမ်းကြည့်ပေတော့ဗျာ
download - AirDroid 2.0.3 (6MB)
Dropbox - https://www.dropbox.com/s/3i6iii5lloctgst/AirDroid%202.0.3_53.apk
Copy - https://copy.com/Vb2VKILo6NCW
Zippyshare - http://www19.zippyshare.com/v/17901308/file.html
Mr.AD ( ရှာ .. တွေ့ .. ဒေါင်း .. စမ်း .. ကြိုက် .. မျှ .. ပျော် )
Review By Mr.AD
ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် လူတိုင်းဟာ ဖုန်းနဲ့ ပက်သက်လာရင် အားလုံးနားလည်ကြပြီးသားပါ
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အခြေခံ သဘောတရားကို နားမလည်ကြပါဘူး ကျွန်တော်လည်း တူတူပါဘဲ အဲဒီအ
တွက်ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပညာရပ်များကို မျှဝေပေးပါရစေ
Android ဆိုတာက မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ အတွက် စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Operation System တစ်ခုဖြစ်တယ်
Android ဟာ Window နဲ့ Linux အပေါ်မှာ အခြေပြု ရေးဆွဲထားတဲ့ System တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
Android ရဲ့ Kernal based ကတော့ Linux Kernal ကို အခြေပြု ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
Linux ဟာလည်း Open Source ဖြစ်တဲ့ အပြင် သီခြားဆန်သော Platform ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Android ဟာ
ရေရှည်အတွက် Linux Kernal ကို ရွှေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
Android ဟာ ဆိုရင် Java တွေ Nokia တွေ စတင်မထွက်ခင်တည်းက တည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့
သူရဲ့ System တွေကို ထုတ်ဖော်မပြသခဲ့သေးပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲဒီတုန်းက သူရဲ့ဖန်ရှင် တွေ သိပ်
ပြီးတော့ မပြည့်စုံသေးဖူးလို့ ယူဆခဲ့လို့ပါ အဲဒီအချိန်မှာ Java တွေ Nokia တွေရဲ့ System တွေကိုလေ့လာ
ပြီးတော့ ၂၀၀၈ခုနှစ် ၉လပိုင်းလောက်မှာ Android version 1.0 ကို Google နဲ့ တစ်ခြား အဖွဲ့ဝင်တွေက အစမ်း
သပ်ကာလအနေန့ စတင်ထုတ်ဝေပြီးတော့ Android Os ကို စတင်ခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာ update တွေ ကို
ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် 1.1,1.5,1.6,2.0,2.1,2.2,2.2.2 အဲဒီ version တွေကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်
Android ဟာ ဆိုရင် ၂၀၁၀ခုနှစ် လောက်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး smart phone အဖြစ် Android
ရဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် နှစ်တော်တော်ကြာ နေရာယူလာတဲ့ Nokia ကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဗားရှင်းတွေကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေလာခဲ့တာဟာ အခုအချိန်အထိပါ
4.0,4.0.4 Ice Cream Sandwich
4.1.1,4.1.2,4.3 Jelly bean
ဒီဖိုင်လေးကို သိမ်းထားချင်ပါက ဒီမှာဒေါင်းရန်
Android အတွက် သင်ခန်းစာ (၁) အားဒေါင်းယူရန်
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် DJ Mix ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် - edjing PRO – Music DJ mixer v1.0.2 Apk ♫
♪ မိုဘိုင်းအင်တာနက် အတွက်2GB Plan ကို Telenor မှ ရောင်းချ ♫
Telenor ၏ ကြေညာချက်အရ ၎င်းတို့သည် လစဉ်သုံး2GB Plan ကို အမြန်နှုန်း2Mbps ပေးအပ် ထားပြီး ဈေးနှုန်းကို ၁၁,၉၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
Telenor အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ဆက်ကြောင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို2GB Plan တိုးမြှင့်ပေး ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ဆက်ကြောင်း၌ Bandwidth ပမာဏ 10 GB ကို ပထမအဆင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
3G Manager – Battery saver v2.5.0 Apk လေးကတော့ ဖုန်း battery ကိုကြာရှည်ခံစေ ပြီး ဖုန်းအား
မကုန်အောင် on/off တွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်လို့ဆောငင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ
အောက်မှာဒေါင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ( ပုသိမ်နည်းပညာ )
3G Manager – Battery saver v2.5.0 Apk | 188 KB | Resumable Links | Requires Android:2.3 and Up
ဖုန်းမှာဘောပွဲရလဒ်လေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Forza Soccer
ဖုန်းမှာဘောပွဲရလဒ်လေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Forza Soccer လေးပါ
ဒီ Apk လေးမှာ တခြား apk လေးနဲ့ဘာတွေထူးခြားပါဝင်လာလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်
စမ်းသုံးကြည့်ပြီး မှယုံကြည်လိုက်ပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
ANDROID ရဲ့ ဖုန်းလိုင်းဆွဲအား၊ INTERNET ဆွဲအား၊ ဘက်ထရီကြာရှည်ခံမှု စတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ကို မြှင့်တင်ပေး မယ့် ALL IN ONE BOOSTER PRO FOR ANDROID
ဒီ App ကတော့ Android Devices တွေမှာ ဖုန်းလိုင်းဆွဲအားကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်.. Internet လိုင်းအား ကို မြှင့်တင်ပေးတယ်.. Wi-Fi ကို ပိုမိစေတယ်.. ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ပိုကြာကြာ ခံအောင် လုပ်ပေး တယ်... Android OS ကို ပိုသွက်အောင်လုပ်ပေးမယ်.
ဒါကြောင့် All In One Booster လို့တောင် နာမည်ပေးထားတာထင်တယ်.. Android 2.1 နှင့်အထက် တွေမှာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်...
Download Links: SolidFile-------> Here !
Credit to :မောင်ပေါက်
Posted by lin linn at 6:39 AM
ဖုန်းက Internet ကို ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ဆတ်အသုံးပြုနည်း
ဖုန်း အင်တာနက်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်သုံးချင်ရ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါလေ။
အဆင့်(၁) easytether ကို ဖုန်းထဲတွင် Install လုပ်ယူပါ။ USB ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားပါ။
Download Easytether For Phone From Zippyshare
Download Easytether For Phone From Solidfiles
အဆင့်(၂) easytether ကို ကွန်ပျူတာတွင် Installl လုပ်ပါ။
Download Easytether For Computer From Zippyshare
Download Easytether For Computer From Solidfiles
အဆင့်(၃) ဖုန်းကို အင်တာနက် ဖွင့်ထားပြီး USB ဖြင့် ကွန်ပျူတာတွင် ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖုန်းတွင် USB debugging ဖွင့်ထားရန် လိုသည်။
အဆင့်(၄) ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ပါက ကွန်ပျူတာ Start bar တန်း ညာအောက်ဖက်တွင် easytether Icon လေး ပေါ်နေလိမ့်မည်။ နှိပ်လိုက်ပါက ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Connect Via Android (your phone name) ဆိုသော စာတန်းလေးကို နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့်(၅) Mozilla Firefox ဖွင့်၍ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။
ANDROID ဖုန်းေ လး လံနှေးကွေး ရခြင်း အကြောင်း အရင်း...
သင့်ပုံလေးကို ခဲပန်းချီ /ကာလန်းeffect လေးနဲ့ပိုလှေ...
ဖုန်းက Internet ကို ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ဆတ်အသုံးပြုန...
နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပွဲတိုင်းကို ဖုန်းနဲ့ ကြည့်ရအောင...
Android စက်ရုပ်က Apple အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် ကျင်ငယ်စွန်...
ဖုန်းမှာ အသည်းပုံဒီဇိုင်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့်-KF He...
ဖုန်းထဲက ဗိုင်းရပ်တွေကိုရှာပေးနိုင်တဲ့ - Virus sca...
သင့်အလှဓာတ်ပုံတွေကို Color ချိန်းပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်...
ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကို တခြားသူမကြည့်နိုင်အောင် lo...
နားမကြားသူတွေဖုန်းပြောနိုင်မဲ့ Pedius App
Hacker တို့၏ထိုးဖောက်နည်းများနှင့် HACKER အန္တရာယ်က...
စမတ်ဖုန်းများကို တစ်မိနစ်အတွင်း အားသွင်းနိုင်မည့် ...
သင့်ဖုန်းပြောသမျှတိုင်းကို auto မှတ်ထားပေးနိုင်တဲ့...
ကိုယ့် Facebook Profile မှာ Virus ရှိ/မရှိ စစ်နည်း...
GOOGLE ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့် GOOGLE လို့ ခေါ်ပါသလဲ....
ဖုန်းထဲ့မှာသီချင်းနားထောင်းရန်ကြည့်ရန် -Shuttle+ M...
Apple Cydia Beginner Guide (မြတ်မင်းစိုး)
COC မှာမြန်​မာလို​ပြောချင်​သူ​တွေအတွက်​ COC Myanma...
Photo Grid ကိုသုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ်မယ်....
Facebook ကိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ - Fast Pro ...
SnapTube YouTube Downloader HD Video v1.9.6 build ...
Myanmar Mobile Zawgyi Changer2v1.0.3 for Android...
ဖုန်းမှာ အင်တာနက်၊၀ိုင်ဖိုင်နဲ့App သုံးသမျှကိုတွက်...
SCR Screen Recorder Pro v0.21.7 Cracked APK
ဖုန်းမှာ Root ဖောက်ပြီးအသုံးမတည့်ရင် Root ကိုရှင်း...
Mobile Counter Pro – 3G, WIFI v3.9 Apk
ဖုန်းထဲမှာ ဂီတာတီးရန် ဝါသနာ အိုးတွေအတွက်-Real Guit...
သီချင်းတွေကို ဖုန်းမှာအကောင်းဆုံးနားဆင်နိုင်တဲ့ - ...
သင့်ဖုန်းကိုဗားရှင်းမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ - Upgrade fo...
HWH ဥုံ 5+versionထွက်​ရှ်ိ
Fake Call2 v0.0.15
ဖုန်းမှာ သူများမမြင်စေခြင်တဲ့ App တွေ lock ချဝှက်ထ...
မိန်းကလေးတွေအကြိုက် Launcher အလန်းလေး- Pinky Bow G...
ဖုန်းမှာBluetooth (သို့) Wifi ချိတ်ပြီးစကားပြောစက်...
Ais Lava ဖုန်း 800 အားလုံးကိုအလွယ်တကူ Root လုပ်ပြီ...
ဖုန်း Wallpaper ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Landscape Live ...
♪ စမတ်ဖုန်းများမှာ WiFi အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နည်းများ ...
Anti Porn 22.0.4.10 Patch Crack 2015 Full Version ...
iOSကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် version 8.1.3...
Wireless ထိုးဖောက်ခြင်း စမ်းသပ်ချက်များ (Wifi Hack...
Software များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
ဒါဖတ်ပြီးမှ Latop , Computer ဝယ်ပါ
ဘလော့ဆိုင်ရာစာအုပ်များစုစည်းမှု ( နှစ်သစ်အမှတ်တရလက...
♪ ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီး ရုပ်သံလိုင်းများစွာကို အခမဲ့...
ဖုန်း Wallpaper ဒီဇိုင်းအလန်းလေး
SHV-E250S Galaxy Note2- Korea အလုံး 4.4.2 Kitkat...
♪ မိမိရဲ့မူရင်းအသံကို အသံပေါင်း ၃၀ နီးပါးပြောင်းလည...
ခေတ်စားလာပြီ ဖြစ်တဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က အိမ်ခြံမြေ ရော...
♪ Android Application များရေးဆွဲဖန်တီးလိုသူများလက်...
ဆမ်ဆောင်းပစ္စည်းများ အွန်လိုင်းတွင် ၀ယ်ယူနိုင်မည်